Caafimaadka | COVID-19 In Your Language
Ka hortag faafidda COVID-19.
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 30 March 2021
Haddii aad qabtid calaamado halis ah sida neefsashada adag, fadlan u wac 000 caawimo caafimaad oo degdeg ah.
Astaamaha coronavirus waxaa ka mid ah:
neefta oo gaabis ah.
Calaamadaha kale waxaa ka mid noqon kara sanka oo duuf leh, madax xanuun, murqo ama xanuun laalabadka jidhka, lallabo, shuban, matag, luminta dareenka urta, beddelidda dareenka dhadhanka, rabitaanka cuntada iyo daal.
Haddii aad xanuusan tahey oo aad u malaynaysid in aad qabtid coronavirus, raadso caawimo caafimaad.
Waxaad wici kartaa Helpline Qaranka Coronavirus on 1800 020 080 wixii macluumaad dheeraad ah. Haddii aad u baahan tahay caawimaad turjubaan oo luqadaada ah, fadlan wac 131 450.
Websaytka Waaxda Caafimaadka waxay leedahay macluumaad badan oo laga heli karo luuqadaha aan ka ahayn Ingiriisiga si ay dadka uga caawiyaan inay badbaadaan oo ay yareeyaan khatarta bulshada.
Dheeraad luqadda ah oo ku saabsan ilaha waxaa laga heli karaa www.sbs.com.au/language/coronavirus.
Baaritaanka iyo daaweynta COVID-19
Xitaa haddii aanad haysan fiise, ama aanad hubin xaaladda fiisaha, waa inaad raacdaa tilmaamaha caafimaadka dadweynaha. Haddii aad dareemeysid si aan fiicnayn oo aad leedahay calaamadaha, iyada oo aan loo eegin sida u fududahey, waa inaad raadsataa daryeel caafimaad oo aad iska baadho COVID-19.
Raadi xarunta caafimaadka neefsashada COVID-19kuugu dhow.
Had iyo jeer ku dhaqma nadaafadda wanaagsan, gacmahaaga ku maydh saabuun iyo biyo 20 ilbiriqsi, qufacaaga dabool, iska ilaali taabashada indhahaaga, sanka iyo afka.
Joogtee masaafada bulsho ee ugu yaraan 1.5 mitir marka aad guriga dabadiisa tahay.
Iska ilaali salaamaha jidhka sida gacan-qabsiga, hab isasiinta iyo dhunkashada.
Waxaad ku dhaqantaa daryeel dheeraad ah haddii aad isticmaalayso gaadiidka dadweynaha.
Iska ilaali buuqa badan iyo isugu imadka wayn ee dadweynaha.
Si fiican u ogeysii — kaliya isticmaal macluumaadka rasmiga ah ee lagu kalsoon yahay. Soo deji app-ka taleefanka gacanta Coronavirus Australia , sabiskaraabgaree adeegga Coronavirus Australia WhatsApp, oo booqo www.australia.gov.au macluumaadkii ugu dambeeyey.
Khadka Caawinta Dadka Da'da Weyn COVID-19
Dadka Waayeelka ah COVID-19 Taageerada Khadka, wuxuu taageeraa oo isku xidhaa dadka Australiyaanka ah.
Qaar ka mid ah dadka waayeelka ah waxay u nugul yihiin COVID-19 laakiin waxay ku xiran yihiin internetka waxayna u baahan yihiin siyaabo lagu heli karo macluumaadka duruufahooda. Dadka Waayeelka ah ee COVID-19 waxay bixisaa macluumaad iyo taageero.
Australiyaanka waayeelka ah, qoysaskooda, asxaabta iyo daryeelayaasha waxay taleefan bilaash ah u sameyn karaan 1800 171 866 haddii ay:
uu jeclaan lahaa in uu kala hadlo qof wax ku saabsan xayiraadaha COVID-19 iyo saameynta ay ku leedahay iyaga
dareemaan cidlo ama walwal ku saabsan qof la jecel yahay
daryeelo qof oo u baahan yahey qaar macluumaadka qaarkood ama qof ay la hadal
u baahan yahey caawimo ama talo ku saabsan bedelida adeegyada daryeelka dadka da'da ah ee ay helayaan
waxay u baahan yihiin caawimo si ay u helaan adeegyo cusub oo daryeel ama sahayda muhiimka ah sida dukaamaysiga
ka welwelsan yihiin naftooda, saaxiib ama xubin qoyska ah oo la nool xanuunka dhimirka
wuxuu jeclaan lahaa in la diyaariyo baaritaan hal-mar ah ama samaqabka caadiga ah ee naftooda, ama qof kale.
Australiyaanka Da'da waaweyn, qaraabadooda, daryeelayaasha, asxaabta ama taageerayaasha waxey wici karaan 1800 171 866 ka 8.30am - 6pm AEST maalmaha shaqada wixii macluumaad ah ama adeegyada ay u baahan karaan.
Uurka, naas-nuujinta, iyo tallaalada COVID-19 (pdf, 276.17 KB)
Tallaallada COVID-19 ayaa laga heli karaa (pdf, 146.86 KB)
Carruurta da&#039;doodu tahay 12 iyo ka weyn ayaa heli kara talaalka covid-19 (pdf, 107.31 KB)
Macluumaadka ku saabsan tallaalka COVID-19 Pfizer (Comirnaty) (pdf, 284.08 KB)
Macluumaadka tallaalka Spikevax (Moderna) COVID-19 (pdf, 288.61 KB)
Foomka oggolaanshaha ee tallaalka COVID-19 (pdf, 299.15 KB)
Hel caddayn lacag la&#039;aan ah oo tallaalkaaga COVID-19 (pdf, 102.28 KB)
Hel caddeyn tallaalkaaga COVID-19 (pdf, 198.34 KB)
Kadib tallaalkaaga COVID-19 - Pfizer (pdf, 278.39 KB)
Ardayda caalamiga ah ee jooga Australiya waxay heli karaan tallaalada COVID-19 (pdf, 137.48 KB)
Ka dib tallaalkaaga Spikevax (Moderna) COVID-19 (pdf, 267.64 KB)
TALLAALKA COVID-19 WAA U BILAASH QOF WALBA (pdf, 760.28 KB)
Saamaynta COVID-19 ee muddada dheer (pdf, 219.94 KB)
Diyaarinta tallaalka COVID-19 (pdf, 242.24 KB)
Macluumaadka ku saabsan tallaalka COVID-19 AstraZeneca (pdf, 411.88 KB)
Ka dib tallaalkaaga COVID-19 - AstraZeneca (pdf, 353.09 KB)
Macluumaadka AstraZeneca (pdf, 328.93 KB)
Waxa laga filan karo maalinta tallaalka COVID-19 ee xarunta lagu daryeelo dadka da’da ah ee deggan (pdf, 388.79 KB)
WARBIXIN JOOG KU SAABSAN COVID-19 TALAALO. (pdf, 166.52 KB)
TGA si loo siiyo dadka Australiyaanka ah kalsooni ay ku helaan tallaalka COVID-19 (pdf, 117.05 KB)
Adeegyada murugada iyo dhaawaca (pdf, 171.69 KB)
COVID–19: AQOONSIGA ASTAAMAHA (pdf, 152.63 KB)
Daryeelka caafimaadkaaga maskaxda (pdf, 152.55 KB)
Caawinaad markaad ubaahantahay - taageerida caafimaadkaaga maskaxda (pdf, 275.93 KB)
Waa muhiim inaad heshid baaritaanka COVID-19 haddii aad leedahay astaamo (pdf, 138.53 KB)
Baadhitaanka ayaa loo heli karaa qof walba (pdf, 135.72 KB)
WAXAAD U BAAHAN TAHAY IN AAD KA OGAATID KAROONFAYRAS ‘CORONAVIRUS’ (pdf, 149.1 KB)
Caafimaadka Maskaxda iyo taageerada ladnaanta shaqaalaha inta lagu gudajiray Cudurka faafa ee COVID-19 (pdf, 140.36 KB)
Caawinta dadka da’da weyn ee Australiyaanka ah (pdf, 142.99 KB)
Ilaalinta ballamahaaga caafimaad (pdf, 182.31 KB)
Waa hagaag in la haysto daryeel guri (pdf, 327.07 KB)
LIX TALAABO OO LAGU JOOJINAYO FIDISTA DEGAANKA XANAANADA DADKA DA’DA (pdf, 150.05 KB)
Lix Talaabo si loo Joojiyo Fidista (pdf, 182.2 KB)
Adeegyada Taageeridda Caafimaadka Maskaxda ee Coronavirus (pdf, 109.04 KB)
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay 23-12-2021